Natsangana Tamin’​ny Maty Tokoa ve i Jesosy?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ngabere Norvezianina Nzema Oromo Ossète Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Twi Uruund Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA: MAHASOA ANAO VE NY NITSANGANAN’I JESOSY TAMIN’NY MATY?
NISY mpahay tantara grika atao hoe Hérodote, 2 500 taona lasa izay, nitantara ny nataon’ny Ejipsianina tamin’ny androny. Izao, hoy izy, no fahita tany amin’ny fetin’ny mpanankarena rehefa avy nisakafo hariva ry zareo: “Misy lehilahy iray mandehandeha mitondra vatam-paty ary misy sarin’olona maty vita amin’ny hazo ao anatin’ilay izy. Niloko sy namboarina hoatran’ny tena izy ilay sariolona, ary antsasa-metatra na iray metatra teo ho eo ny halavany. Asehon’ilay lehilahy amin’ny rehetra ilay izy, sady hoy izy: ‘Misotroa sy mifalia, fa rehefa maty ianareo dia hitovy amin’ity.’”
Tsy ny Ejipsianina ihany no nieritreritra hoatr’izany satria lasa fitenin’ny olona izao ny hoe: “Ataovy izay mahafalifaly anao dieny mbola velona!” Raha tsy maintsy ho faty ihany, hono, isika, tsy aleo ve manararaotra fiainana dieny mbola velona toy izay hisahirana hanao ny tsara? Raha vita hatreo amin’ny fahafatesana tokoa aloha ny amintsika, dia mety ny manararaotra fiainana e! Niresaka zavatra hoatr’izany ny apostoly Paoly. Izao, hoy izy, no noeritreretin’ny olona tsy nino ny fitsanganan’ny maty: “Raha tsy hatsangana ny maty, dia ‘aoka isika hihinana sy hisotro, fa rahampitso dia ho faty.’ ”—1 Korintianina 15:32.
Mazava ho azy fa tsy nino i Paoly hoe hadino hatreo ny amin’ny olona iray rehefa maty izy. Resy lahatra kosa izy fa mbola afaka ny ho velona ny maty ary mety tsy ho faty intsony avy eo. Nino tanteraka mantsy izy fa natsangana tamin’ny maty tokoa i Kristy Jesosy, ary tsy azo lavina mihitsy hoe nitranga izany. * Io no anisan’ny zavatra lehibe indrindra nanatanjaka ny finoan’ny Kristianina voalohany.
Tena mahasoa antsika ve anefa ny nananganana an’i Jesosy tamin’ny maty? Ahoana no ahalalantsika fa natsangana tokoa izy? Andeha isika handinika izay nosoratan’i Paoly ho an’ny Kristianina tany Korinto.
AHOANA RAHA TSY NITSANGANA TAMIN’NY MATY I KRISTY?
Nisalasala ny Kristianina sasany tany Korinto raha hisy tokoa ny fitsanganana amin’ny maty. Nisy aza tsy nino an’izany mihitsy. Nohazavain’i Paoly tao amin’ny taratasiny voalohany ho an’ny Kristianina tany Korinto hoe ahoana tokoa moa raha tsy hatsangana ny maty. Hoy izy: ‘Raha tsy hisy tokoa ny fitsanganan’ny maty, na i Kristy aza tsy natsangana. Fa raha tsy natsangana i Kristy, dia tena very maina ny fitoriantsika, ary very maina ny finoantsika. Ary ho hita fa vavolombelona mandainga ny amin’Andriamanitra isika. Raha tsy natsangana i Kristy, dia zava-poana ny finoanareo, ary mbola ao amin’ny fahotanareo ihany ianareo. Ary very koa izay nodimandry tao amin’i Kristy.’—1 Korintianina 15:13-18.
‘Rahalahy maherin’ny dimanjato no indray nisehoany. Taorian’izany, dia niseho tamin’i Jakoba izy, avy eo tamin’ny apostoly rehetra, ary farany indrindra, dia niseho tamiko koa izy.’—1 Korintianina 15:6-8
Nilaza zavatra tsy azo iadian-kevitra aloha i Paoly. Raha tsy hatsangana, hoy izy, ny maty, dia tsy ho natsangana koa i Kristy. Raha tsy natsangana anefa i Kristy, dia tsy hisy dikany ny hitoriana ny vaovao tsara, satria lainga be ilay hafatra torina. Anisan’ny fototry ny fampianarana kristianina koa ny nitsanganan’i Kristy tamin’ny maty. Milaza, ohatra, ny Baiboly fa Andriamanitra ihany no manana zo hitondra. Ampianarina ao koa ny anarany sy ny Fanjakany ary ny fomba hamonjena antsika. Misy ifandraisany amin’izany fampianarana izany ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty. Raha tsy nisy izany, dia ho zava-poana sy tsy hisy dikany ny hafatra notorin’i Paoly sy ny apostoly hafa.
Raha tsy natsangana koa i Jesosy, dia mino lainga fotsiny ny Kristianina. Tsy vitan’izay fa hoatran’ny hoe nandainga be i Paoly sy ny namany rehefa nitory hoe natsangana i Jesosy, ka toy ny hoe namoron-dainga momba an’i Jehovah Andriamanitra, ilay nanangana azy, koa izy ireo. Tsy ho marina koa ilay hoe “maty noho ny fahotantsika i Kristy.” (1 Korintianina 15:3) Raha ilay Mpamonjy aza mantsy tsy afa-bela tao amin’ny fahafatesana, ahoana moa no hamonjeny ny hafa? Toy ny hoe matimaty foana koa ny Kristianina novonoina noho ny fivavahany, satria nanantena hoe hatsangana nefa tsy hatsangana akory.
Hoy àry i Paoly: “Raha amin’izao fiainana izao ihany no anantenantsika an’i Kristy, dia isika no mampahonena indrindra amin’ny olona rehetra.” (1 Korintianina 15:19) Nitovy tamin’izay nanjo ny Kristianina hafa ihany ny nanjo an’i Paoly. Namoy zavatra be dia be izy, nenjehina, ary nanana olana maro be. Nanao vivery ny ainy mihitsy izy noho izy nino ny fitsanganan’ny maty sy ny soa hoentin’izany. Voa mafy àry izy niaritra an’izany rehetra izany raha tsy hatsangana akory ny maty.
NAHOANA IANAO NO TOKONY HINO FA NATSANGANA TAMIN’NY MATY I JESOSY?
Tsy nieritreritra i Paoly hoe lainga fotsiny ny zavatra ninoan’ny Kristianina. Fantany fa nitsangana tamin’ny maty i Jesosy satria hoy izy: “Maty noho ny fahotantsika i Kristy, araka ny Soratra Masina, ary nalevina izy dia natsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, araka ny Soratra Masina, ary niseho tamin’i Kefasy izy, ary avy eo tamin’izy roa ambin’ny folo lahy. * Taorian’izany, dia rahalahy maherin’ny dimanjato no indray nisehoany, ka mbola velona ankehitriny ny ankamaroany, fa ny sasany kosa efa nodimandry. Taorian’izany, dia niseho tamin’i Jakoba izy, avy eo tamin’ny apostoly rehetra, ary farany indrindra, dia niseho tamiko koa izy.”—1 Korintianina 15:3-8.
Nilaza mazava i Paoly fa maty noho ny fahotantsika i Kristy, nalevina, ary natsangana tamin’ny maty. Nino izany izy satria be dia be no nahita maso an’i Jesosy taorian’ny nitsanganany. Niseho tamin’olona tsirairay izy, anisan’ireny i Paoly. Niseho tamin’ny olona vitsivitsy koa izy, ary tamin’ny olona 500 mihitsy aza. Azo antoka fa mba tsy nino koa ny maro tamin’izy ireny talohan’izay, rehefa nilazana hoe natsangana i Jesosy. (Lioka 24:1-11) Mbola velona ny ankamaroan’ireny vavolombelona ireny tamin’ny andron’i Paoly, ka azo nanontaniana. (1 Korintianina 15:6) Mety ho azo lavina ihany raha iray na roa monja ilay vavolombelona. Olona 500 be izao anefa no indray nisehoan’i Jesosy.
Mariho koa fa indroa i Paoly no nilaza hoe “araka ny Soratra Masina” ny nahafatesan’i Jesosy sy ny nandevenana azy ary ny nananganana azy tamin’ny maty. Hita amin’izany fa tanteraka ny zavatra nolazain’ny Soratra Hebreo momba ny Mesia, ary i Jesosy tokoa ilay Mesia nampanantenaina.
Mampalahelo anefa fa mbola nisy tsy nino ny nitsanganan’i Jesosy ihany taloha, ary toy izany koa ankehitriny. Misy milaza fa nangalarin’ny mpianany ny fatiny dia mody nilaza izy ireo hoe nahita azy velona indray. Nisy miaramila romanina niambina anefa teo amin’ny varavaram-pasany, ka tsy ho vitan’ny mpianany mihitsy ny hifanandrina tamin’izy ireo na handresy lahatra azy ireo. Ny hafa indray milaza fa fahitana fotsiny no hitan’ireo olona nilaza fa nahita an’i Jesosy fa tsy tena i Jesosy nofo aman-dra. Be dia be anefa no nahita an’i Jesosy tamin’ny fotoana samy hafa. Raha hoe tsy tena nitsangana koa izy, dia iza àry ilay nahandro sy nanome trondro ny mpianany tany Galilia? (Jaona 21:9-14) Nisy fotoana koa aza nasain’i Jesosy nikasika azy ny sasany tamin’ny mpianany. (Lioka 24:36-39) Koa raha tsy tena i Jesosy àry no hitan’izy ireo, dia mitombina ve izany rehetra izany?
Na izany aza, dia mbola misy ihany milaza fa nandainga ny mpianatr’i Jesosy. Tsy nisy soa azon-dry zareo tamin’izany anefa. Vao mainka azy izy ireo nisy naneso sy nampijaly ary namono ho faty, noho izy nitory momba ny fitsanganan’ny maty. Ry zareo ve dia hidi-kizo hoatr’izany raha lainga fotsiny ny zavatra notoriny? Tsy vitan’izay fa tany Jerosalema izy ireo no nitory voalohany, nefa be olona nanohitra azy ireo tany. Efa niandry kendry tohina fotsiny aza ireo mpanohitra ireo mba hanamelohana azy ireo.
Ny fitsanganan’i Jesosy no nahatonga ny mpianany ho sahy hitory momba azy, na dia niaritra zavatra mafy be aza izy ireo. Lasa fototry ny fampianarana kristianina ny fitsanganana amin’ny maty. Marina fa mpampianatra nahay i Jesosy ary nisy namono. Tsy ny hitory momba izany fotsiny anefa no nahatonga ny mpianany hanao vivery ny ainy, fa ny hitory momba ny fitsanganany. Izany mantsy no nanaporofo fa izy no Kristy, Zanak’Andriamanitra. Porofo koa izany fa tena misy izy sady mahery, ary izy no nanampy sy nitarika ny mpianany. Raha natsangana i Jesosy dia hatsangana koa izy ireo. Tsy ho nisy ny Fivavahana Kristianina raha tsy natsangana i Jesosy. Mety ho tsy nahalala azy mihitsy aza isika.
Tena mahasoa antsika àry ve ny nananganana an’i Kristy tamin’ny maty?
^ feh. 5 Ny teny grika nadika hoe ‘mitsangana amin’ny maty’, dia mampiseho fa hiverina hiaina indray ilay olona maty, ka tsy hiova ny mombamomba azy sy ny toetrany ary ny zavatra tadidiny.
^ feh. 13 Na dia 11 aza sisa ny apostoly, taorian’ny nahafatesan’i Jodasy Iskariota, dia mbola nantsoina foana hoe “izy roa ambin’ny folo lahy” izy ireo. Indray mandeha koa aza tsy teo i Tomasy, ka mety ho ny 10 tamin’izy ireo ihany no nisolo tena ny apostoly 12.—Jaona 20:24.
Hoy ny Asan’ny Apostoly 24:15: “Hisy fitsanganan’ny marina sy ny tsy marina.” Ireo olona tsy nivadika tamin’Andriamanitra no antsoina hoe marina, anisan’izany ry Noa, Abrahama, ary Saraha. Ireo tsy nahalala ny fitsipik’Andriamanitra ka tsy afaka nankatò an’izany kosa no atao hoe tsy marina.
Ho aiza ireo hatsangana amin’ny maty?
Ho any an-danitra ny olona sasany ary ho lasa fanahy ka tsy ho faty intsony. Ho mpisorona sy ho mpanjaka hitondra ny tany hiaraka amin’i Kristy izy ireo. (Apokalypsy 5:9, 10) Hatsangana mba hiaina mandrakizay ao amin’ny Paradisa eto an-tany kosa anefa ny ankamaroan’ny olona.—Lioka 23:39-43.
Rahoviana no hatsangana ireo hiaina eto an-tany?
Milaza ny Baiboly fa haringana aloha ny ratsy fanahy, ary hanjaka mandritra ny arivo taona i Jesosy avy eo. Mandritra an’io fotoana io no hatsangana ireo olona maro be hiaina eto an-tany, ary hovana ho paradisa ny tany.—Apokalypsy 20:6.
Misy ifandraisany amin’ny nitsanganan’i Jesosy ve ny fombafomba fanao rehefa Paka?
Misy milaza fa mankalaza ny nitsanganan’i Jesosy izy rehefa Paka. Mampiasa sarina bitro na atody, ohatra, izy ireo amin’izany. Avy amin’ny fivavahan’ny mpanompo sampy anefa ireny fombafomba ireny raha ny marina, fa tsy misy ifandraisany amin’ny nitsanganan’i Jesosy. Tsy mampaninona ve izany? Milaza Andriamanitra fa tokony hiala tanteraka amin’ny fivavahan-diso isika, ary “hivavaka amin’ny Ray araka ny fanahy sy ny fahamarinana.”—Jaona 4:23; 2 Korintianina 6:17.
Raha i Jesosy ihany no Andriamanitra, araka ny ampianarin’ny fivavahana sasany, dia iza izany no nanangana an’i Jesosy?
Tsy Andriamanitra i Jesosy fa Zanak’Andriamanitra. I Jehovah kosa no Andriamanitra, ary izy no nanangana an’i Jesosy tamin’ny maty. (Romanina 10:9) Hoy ny manam-pahaizana iray momba izany: “Tsy hisy olona hahavita hanangana ny tenany amin’ny maty mihitsy, eny fa na dia i Kristy aza.” *
^ feh. 38 Raha te hahafantatra kokoa an’izany ianao, dia jereo ny toko 7 sy 8 amin’ny boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah, na midira ao amin’ny www.jw.org/mg.
Hizara Hizara Natsangana Tamin’ny Maty Tokoa ve i Jesosy?
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Mahasoa Anao ve ny Nitsanganan’i Jesosy Tamin’ny Maty
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Mahasoa Anao ve ny Nitsanganan’i Jesosy Tamin’ny Maty
Mahasoa Anao ve ny Nitsanganan’i Jesosy Tamin’ny Maty
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Mahasoa Anao ve ny Nitsanganan’i Jesosy Tamin’ny Maty